Kedu ihe bụ ide mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Iju Mmiri na Costa Rica, October 2011
O nwere ike ịbụ na ị gara ebe mmiri juru. Ebe m bi na Nọvemba 2013 anyị nwere nke oke njọ karịrị ihe anyị nwere ruo mgbe ahụ. Thezọ ahụ ghọrọ osimiri nke nwere omimi banyere ụkwụ. Ma, n'ezie, nke a abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya tụnyere ndị bi na mpaghara ebe okpomọkụ, dị ka Costa Rica ma ọ bụ Hawaii, ga-ebi ndụ ọkachasị, ebe ọ bụghị naanị n'okporo ámá ka mmiri mikpuru, kamakwa obodo niile.
Ma, Gịnị bụ iju mmiri kpọmkwem? Gịnịkwa na-akpata ya?
Idei mmiri abụghị naanị mmiri na-ekpuchi ebe kpọrọ nkụ, dị ka okporo ámá. Ebumnuche dị iche iche nwere ike ịkpata ha: mmiri ozuzo, ebili mmiri, ebili mmiri, ma ọ bụ osimiri tojubigara ókè.
Ha na-adabara na ọdọ mmiri na osimiri, ebe idei mmiri na-eme ka osimiri tojubiga ókè, dị ka ọ na-eme ma ọ bụrụ na anyị etinye bọket n’okpuru pọmpụ na-emeghe. Oge na-abịa mgbe, n'enweghị ikike zuru ezu iji chịkọta mmiri mmiri dị ukwuu, ọ na-apụta. Nwekwara ike ịhụ ihe ịtụnanya a na ubi mgbe mmiri na-ezo nke ukwuu: mgbe a manyere ụwa ka ọ nwee mmiri buru ibu, naanị site n'inweghị ikike dị mkpa ha na-eme ka mmiri na-agba naanị n'elu.
Iju Mmiri na Minatitlán (Veracruz) na 2008
Ọ dị mkpa ịnwe sistemụ ụzọ zuru oke iji zere ịla n'iyi, mana ọ naghị adị mfe mgbe niile maka ndị na-ahụ maka ihu igwe na-ebu amụma na mgbe ihe dị ka ala ọma jijiji ma ọ bụ oke ifufe ga-eme, nke nwere ike ibute idei mmiri.
Mpaghara kachasị dị ize ndụ bụ ndị bi n'akụkụ oke osimiri, ma anyị nwekwara ike imetụta ma ọ bụrụ na anyị bi n’akụkụ osimiri ma ọ bụ apịtị apịtị. Na United States, ebe a na-enwe oke ebili mmiri iri na-akpata otu afọ, steeti dịka Kentucky, California ma ọ bụ Virginia nwere ike ịnata oke idei mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Idei mmiri » Gịnị bụ ide mmiri